आजको राशिफल (२०७६ पौष ८ गते मंगलबार)
आजको पञ्चांग आज मिति २०७६ पौष ८ गते मंगलबार, इस्वीसंवत डिसेम्वर २४ तारिक सन् २०१९, श्री शालीबाहनीय शाके १९४१, नेपाल संवत् ११४०, परिधावीनामः संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्द्धमा छन् । हेमन्त ऋतु चलिरहेको छ । चान्द्रमान अनुसार पौषकृष्णपक्ष चलिरहेको छ । सौरमान अनुसार आज पौषकृष्णपक्षको त्रयोदशी तिथि अहोरात्र रहनेछ । आज अनुराधा नक्षत्र रहनेछ । विष्कुम्भादि योगमा शूल, करणमा वणिज रहनेछ भने आनन्दादि योगमा वज्र रहनेछ । सूर्य धनु राशिमा,… पुरा पढौ
आध्यात्मिक जागरणलाई समृद्धिसँग जोडौं : मुख्यमन्त्री
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले आध्यात्मिक जागरणलाई समृद्धि र उन्नतिसंग जोड्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।खपोखराको पर्यटकीय क्षेत्र छोरेपाटनस्थित गुप्तेश्वर महादेव गुफा परिसरमा सोमबार आयोजित आरतीमा सहभागी उनले यस्ता कार्यक्रमले समाजमा भावनात्मक एकता एवम् सद्भाव कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्राकृतिक सम्पदानको प्रचार प्रसार र प्रवद्र्धनका लागि गण्डकी प्रदेश प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै उनले पोखराको समग्र विकास एवम् पर्यटन प्रवद्र्धनमा धार्मिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गरे ।पोखरा र… पुरा पढौ
आज इतिहासकै खतरनाक र दुर्लभ सूर्यग्रहण, के-के गर्नुहुँदैन ?
आज पुस १० गते बिहीबार बिहान सूर्य खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्दैछ । २ घन्टा ४९ मिनेट लामो ग्रहण त्यस दिन नेपाली समयअनुसार बिहान ८ बजेर ४२ मिनेटमा सुरू भएर १० बजेर १ मिनेट मध्य र ११ बजेर ३१ मिनेटमा सकिनेछ । पश्चिम र नैऋत्य कोणको बीचबाट बिहान ग्रहण शुरु भई पूर्व र आग्नेय कोणको बीचबाट ग्रहण समाप्त हुनेछ । खण्डग्रास सूर्यग्रहण अधिकतम् भएको बेला नेपालको काठमाडौंबाट ४८ प्रतिशत कालो सूर्य देखिनेछ… पुरा पढौ
आजको राशिफल (२०७६ पौष ७ गते सोमबार)
आजको पञ्चांग आज मिति २०७६ पौष ७ गते सोमबार, इस्वीसंवत डिसेम्वर २३ तारिक सन् २०१९, श्री शालीबाहनीय शाके १९४१, नेपाल संवत् ११४०, परिधावीनामः संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्द्धमा छन् । हेमन्त ऋतु चलिरहेको छ । चान्द्रमान अनुसार पौषकृष्णपक्ष चलिरहेको छ । सौरमान अनुसार आज पौषकृष्णपक्षको द्वादशी तिथि अहोरात्र रहनेछ । आज विशाखा नक्षत्र रहनेछ । विष्कुम्भादि योगमा शूल, करणमा वणिज रहनेछ भने आनन्दादि योगमा वज्र रहनेछ । सूर्य धनु राशिमा,… पुरा पढौ
आजको राशिफल (२०७६ पौष ६ गते आइतबार)
आजको पञ्चांग आज मिति २०७६ पौष ६ गते आइतबार, इस्वीसंवत डिसेम्वर २२ तारिक सन् २०१९, श्री शालीबाहनीय शाके १९४१, नेपाल संवत् ११४०, परिधावीनामः संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्द्धमा छन् । हेमन्त ऋतु चलिरहेको छ । चान्द्रमान अनुसार पौषकृष्णपक्ष चलिरहेको छ । सौरमान अनुसार आज पौषकृष्णपक्षको एकादशी तिथि अहोरात्र रहनेछ । आज चित्रा नक्षत्र रहनेछ । विष्कुम्भादि योगमा अतिगण्ड, करणमा भद्रा रहनेछ भने आनन्दादि योगमा लुम्व रहनेछ । सूर्य धनु राशिमा,… पुरा पढौ
भगवान श्रीकृष्णको हत्या भएकै हो ?
महाभारतको युद्ध पश्चात् भगवान कृष्णले द्वापरयुगमा पापीहरूको अन्त्य गरेका थिए । जतिबेला यो पृथ्वीमा पापीहरू धेरै हुन्छन् त्यो बेला भगवान विष्णु कुनै न कुनै रुपमा अवतरित भएर पापको नास गरेर धर्मको उद्धार गर्छन् भन्ने हिन्दू मान्यता रहेको छ । यसरी महाभारतको युद्ध गराएर भगवान कृष्णले संसारका पापीहरूको त नास गरे तर असंख्यको रुपमा वृद्धि भएको याद्वपकुल देखेर यसलाई पनि नास गराउने उनको इच्छा थियो । महाभारतको युद्धको कारण कृष्ण भएकोले… पुरा पढौ
आजको राशिफल (२०७६ पौष ४ गते शुक्रबार)
आजको पञ्चांग आज मिति २०७६ पौष ४ गते शुक्रबार, इस्वीसंवत डिसेम्वर २० तारिक सन् २०१९, श्री शालीबाहनीय शाके १९४१, नेपाल संवत् ११४०, परिधावीनामः संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्द्धमा छन् । हेमन्त ऋतु चलिरहेको छ । चान्द्रमान अनुसार पौषकृष्णपक्ष चलिरहेको छ । सौरमान अनुसार आज पौषकृष्णपक्षको नवमी तिथि अहोरात्र रहनेछ । आज उत्तराफाल्गुणी नक्षत्र रहनेछ । विष्कुम्भादि योगमा आयुष्मान, करणमा बालव रहनेछ भने आनन्दादि योगमा मातंग रहनेछ । सूर्य धनु राशिमा,… पुरा पढौ
आजको राशिफल (२०७६ पौष ३ गते बिहीबार)
आजको पञ्चांग आज मिति २०७६ पौष ३ गते बिहीबार, इस्वीसंवत डिसेम्वर १९ तारिक सन् २०१९, श्री शालीबाहनीय शाके १९४१, नेपाल संवत् ११४०, परिधावीनामः संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्द्धमा छन् । हेमन्त ऋतु चलिरहेको छ । चान्द्रमान अनुसार पौषकृष्णपक्ष चलिरहेको छ । सौरमान अनुसार आज पौषकृष्णपक्षको अष्टमी तिथि अहोरात्र रहनेछ । आज उत्तराफाल्गुणी नक्षत्र रहनेछ । विष्कुम्भादि योगमा आयुष्मान, करणमा बालव रहनेछ भने आनन्दादि योगमा मातंग रहनेछ । सूर्य धनु राशिमा,… पुरा पढौ
आजको राशिफल (२०७६ पौष २ गते बुधबार)
आजको पञ्चांग आज मिति २०७६ पौष २ गते बुधबार, इस्वीसंवत डिसेम्वर १८ तारिक सन् २०१९, श्री शालीबाहनीय शाके १९४१, नेपाल संवत् ११४०, परिधावीनामः संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्द्धमा छन् । हेमन्त ऋतु चलिरहेको छ । चान्द्रमान अनुसार पौषकृष्णपक्ष चलिरहेको छ । सौरमान अनुसार आज पौषकृष्णपक्षको सप्तमी तिथि अहोरात्र रहनेछ । आज पूर्वाफल्गुणी नक्षत्र रहनेछ । विष्कुम्भादि योगमा प्रीति, करणमा भद्रा रहनेछ भने आनन्दादि योगमा बब रहनेछ । सूर्य धनु राशिमा,… पुरा पढौ
आजको राशिफल (२०७६ पौष १ गते मंगलबार)
आजको पञ्चांग आज मिति २०७६ पौष ३० गते मंगलबार, इस्वीसंवत डिसेम्वर १७ तारिक सन् २०१९, श्री शालीबाहनीय शाके १९४१, नेपाल संवत् ११४०, परिधावीनामः संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्द्धमा छन् । हेमन्त ऋतु चलिरहेको छ । चान्द्रमान अनुसार पौषकृष्णपक्ष चलिरहेको छ । सौरमान अनुसार आज पौषकृष्णपक्षको षष्ठी तिथि अहोरात्र रहनेछ । आज मघा नक्षत्र रहनेछ । विष्कुम्भादि योगमा विशाखा, करणमा गर रहनेछ भने आनन्दादि योगमा काल रहनेछ । सूर्य धनु राशिमा,… पुरा पढौ